नेवारी ‘फिगर कोकाकोला’, गायनमा अशिष्माको करियर कस्तो होला ? (भिडियो) « Mazzako Online
नेवारी ‘फिगर कोकाकोला’, गायनमा अशिष्माको करियर कस्तो होला ? (भिडियो)
मज्जाको अनलाईन, असोज २४ गते आईतबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
उसो त अशिष्मा नकर्मी भन्ने वित्तिकै चलचित्रकी राम्री नायिका भनेर मानषपटलमा चित्र आउछ । तर अब यिनै नायिकालाई गायिकाको रुपमा पनि सुन्न पाईने भएको छ । उनी आफैले अभिनय गरेको चलचित्र ‘अधकट्टी’को ‘फिगर कोकाकोला’को नेवारी भर्सनमा उनको आवाज सुन्न पाईन्छ ।
बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको यस गीतलाई बरिष्ठ हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले नेवारीमा अनुवाद गरेका हुन् । गायनमा अशिष्मालाई मदनकृष्णकै छोरा यमन श्रेष्ठले साथ दिएका छन् । ‘फिगर कोकाकोला’ पछि यि नायिकाको गायकी कस्तो होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कार्तिक ३ गतेदेखि सार्वजनिक प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र ‘अधकट्टी’लाई सञ्चारकर्मी सुब्रत आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा विल्सन बिक्रम राई, गौरव पहारी, गजित बिष्ट, अशिष्मा नकर्मी, रिस्ता बस्नेत र प्रदिप बास्तोलाको अभिनय रहेको छ । द्वरारिका उदय प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित अधकट्टीलाई प्रदीप कुमार उदयले निर्माण गरेका हुन ।